Wararkii u dambeeyey ee Boosaaso – Puntland Post
Posted on November 13, 2019 November 14, 2019 by Liban Yusuf
Ciidamada ka soo kicitimay degmada Carmo oo isugu jiray kuwa ka tirsan Daraawiishta Punttland iyo maleeshiyo beeleed waxaa hoggaaminayey Ciise Yulux, waxayna doonayeen in ay gudaha u galaan magaalada Boosaaso, ka hor inta aysan is hor-taag ku sameyn ciidan kale oo ka tirsan kuwa dowladda.
Ciidamadii ka soo ruqaansaday Carmo oo 20 gaari oo 16 ka mid ah yihiin kuwa dagaal watay ayaa markii dambe u suurta-gashay in ay gudaha u galaan magaalada Boosaaso, waxayna markii ay gaareen fariisimo ka dhigteen dhowr meelood oo ay ka mid tahay xarunta shirkadda PDG.
Shirkadda PDG ayaa taakulaynta u qaabilsan ciidamada Badda Puntland ee PMPF, waxaana muddooyinkii u dambeeyey taagnaa xiisad u dhaxaysey mulkiilayaasha shirkadaas iyo dowladda.
Ciise Yulux ayaa ka mid ah ragga saamiga ku leh shirkadda PDG oo tan iyo 2011 taakulaynta u qaabilsanayd ciidamada Badda Puntland ee PMPF, sida ay ogaatay Puntland Post.
Ciise Yulux oo ka mid ahaan jiray hoggaamiyaashii burcad badeedda Soomaalida kuwii ugu caansanaa ayaa tan iyo 2016 ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Daraawiishta Puntland, wuxuuna ka qeybgalay dagaaladii Puntland iyo Daacish ku dhexmaray buuraha Cal-miskaat ee gobolka Bari.